ပထမဆုံး ဧပရယ်: အစိမ်းသေခဲ့သောအမှတ်တရနေ့ စွဲ
ညှိနှိုင်းလို့ မရတော့တဲ့ မာနတစုံအကြားမှာ
တစတစနဲ့ မှုန်ဝါးလာပြန်တော့တယ် ။
နင်နဲ့ ခွဲရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိက
14 July 2012/Saturday
စကားလုံးအသွင်ချရေးကြည့်မိတာပါ ။ ။
╰☆╮╰☆╮╰☆╮ ╰☆╮╰☆╮╰☆╮ ╰☆╮╰☆╮╰☆╮ ╰☆╮╰☆╮╰☆╮ ╰☆╮╰☆╮╰☆╮
မိုးသူရဲ့ blog ကို အမြဲလိုလိုလာရောက်အားပေး
မိတ်ဆွေသင်္ဂဟ blogger အပေါင်းတို့ ရေ
နားလည်ချင်ဇောနဲ့ အားစိုက်ထုပ်ပြီးမဖတ်ပါနဲ့ 
မိုးသူရေးတဲ့ ကဗျာတွေက အဆင့်သိပ်မမြင့်သေးပါဘူး
အနက်နဲနဲတွေအရမ်းမတွေးပါနဲ့ အပေါ်ယံလေးသာ ရှပ်တွေးပါ
စကားလုံးတွေကို စကားလုံးအသွင်၊အဓိပ္ပါယ်အနေနဲ့ နားလည်ပြီးသာဖတ်ပါ
မိုးသူဆိုလိုချင်တဲ့ ဦးတည်ချက်ကိုဖတ်နေရင်းနဲ့ 
သူ့ ဟာသူ ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်
မိုးသူအားကျရတဲ့ ကဗျာဆရာကြီးတွေကို မမှီနိုင်သေးပါဘူး
မိုးသူကဗျာတွေက သာမန်အတွေးနဲ့ တင်လုံလောက်ပါတယ်
မိုးသူအားကျရတဲ့ ကဗျာဆရာ ဆရာငြိဏ်းဝေ တို့ ဆရာမောင်ချောနွယ်
ဆရာဖော်ဝေး ဆရာတာရာမင်းဝေ ဆရာဇော်ဇော်အောင်
တို့ ရဲ့ ခြေဖျားကိုတောင်မမှီနိုင်သေးပါဘူး
ဆရာငြိဏ်းဝေရဲ့ ပိုစ့်မော်ဒန် ကဗျာတချို့ ဖတ်ကြည့်ကြည့်ပါ
မိုးသူအရမ်းကြိုက်တဲ့ style နဲ့ 
ဒီဟာက နောက်တပုဒ်ပါ ဆရာငြိဏ်းဝေလက်ရာလေးပါပဲ>>>>>
သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့ အားပေးမှုတွေနဲ့ 
(⁀‵⁀,)♥ ♥ ♥♥ ♥ ♥
... ♥¸.•°*”˜˜”*°•. ♥ ♥. :) (⁀‵⁀,)♥ ♥ ♥
... ♥¸.•°*”˜˜”*°•. ♥ ♥. :)
ရေးသားသူ မိုးသူ(တောင်ကြီး) at Thursday, July 26, 2012
အဲဒီမြေဇာမြက်ကနေ အလွမ်းပင်လေးတွေ ဖူးပွင့်ဝေေ၀စီခဲ့ရတာပေါ့ကွယ်
ကဗျာလေးတွေလာလာဖတ်ပြီး အားကျမိပါတယ် ရေးတတ်ချင်လိုက်တာ
ဖေ့ဘုတ်မှာတင်လိုက်မယ် ကြိုက်လို့ :P